New Star Cricket 1.7.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား New Star Cricket
New Star Cricket ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျွန်တော်တစ်ဦးတပြင်လုံးကိုအသစ်အားကစားနယ်ပယ်တွင်သို့နယူးစတားဘောလုံး၏ BAFTA ဆုရဂိမ်းချဲ့ထွင်အဖြစ်နယူးစတားအားကစားပြိုင်ပွဲကနေတစ်ဦးကကြီးမားတဲ့ကြိုဆို!
နယူးစတားခရစ်ကက်ခုနှစ်, သင်တစ်ဦးအလားအလာလူငယ်အကယ်ဒမီကစားသမားအဖြစ်သင့်ပုရစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်, ပြပွဲ၏ကြယ်ပွင့်ကြသည်။ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်, တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုရစ်ကစားသမားအပေါငျးတို့ထောင်ချောက်ဝယ်ယူရန်နှင့်အားကစား၏အထွတ်အထိပ်မှထလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကစား!
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ, သငျသညျ, နည်းပြအဖွဲ့-အိမ်ထောင်ဖက်စောင့်ရှောက်ခြင်း, သင့်ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမယ်, သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်သင့်စပွန်ဆာကိုပျော်ရွှင်သင်လမ်းတလျှောက်ပြဿနာများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စပွေီးမှရင်ဆိုင်ရသည်။
အတှေ့အကွုံတဲ့ professional ခရစ်ကတ်အဖြစ်ဘဝ, သင့်အမျိုးသားရေးအသင်းများအတွက်ကစားနှင့်ကမ္ဘာပတ်လည်အများအပြားပုရစ်လိခ်မှဝိညာဉ်တော်သည်, ကျွမ်းကျင်မှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အသင်းများကိုဖမ်းယူတဲ့မိုဘိုင်းပုရစ်ခေါင်းစဉ်ရဲ့စစ်မှန်မှုကိုအတွက်ဗျာဒိတ်ကျမ်း!
မိနစ်အနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်အထူးကြပ်မတ်နာရီအနည်းငယ်များအတွက်ရေစာဂိမ်းအဖြစ်အညီအမျှပျော်စရာ, နယူးစတားခရစ်ကက်စိတ်ထဲတွင်သဘောကျနှင့်ပိုပြီးအဘို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်, ဧည့်ခံသငျသညျချန်ထားမည်နှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ဤသည်ကြီးမားသော, အသေးစိတျပုရစ်ဝဠာကိုပိုင်ဆိုင်ရင်းသင့်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လင်းနို့များနှင့်ဘောလုံးရနှင့်သင်၏ပထမဆုံးစာချုပ်ဝင်ငွေ!
ခေတ်သစ်ပုရစ်ဂိမ်း super-စွဲလမ်း, စိတ်လှုပ်ရှားစရာကိုယ်စားပြုမှု!
သင့်ရဲ့ ALTER အတ္တနှင့်လင်းနို့ Create, ပန်းကန်, run နိုင်ငံတကာဘုန်းအသရေဖို့လိခ်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းဖမ်းခြင်းနှင့်ပစ်!
ဒဏ္ဍာရီဂွန် & Moore®မှအံ့သြဖွယ် high-performance ကိုပုရစ်လင်းနို့နှင့်အတူ Play!
, အေးဂျင့်များငှားရမ်းသင်တန်းဆရာအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့လာသင်ယူ, သင့်အခွက်တဆယ်ဖွံ့ဖြိုး!
ပိုပြီးမှတပါးအလောင်းကစားရုံ, ကိုယ်ပိုင်ယှဉ်ပြိုင်-မြင်းများနှင့်ခံစားကြည့်ပါ - ဒါပေမယ့်ချိုမြိန်သူဌေးကစောင့်ရှောက်ဖို့မမေ့မလြော့ပါ!
New Star Cricket အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
New Star Cricket အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
New Star Cricket အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
New Star Cricket အား အခ်က္ျပပါ
apkgiochi33 စတိုး 82 87.64k
New Star Cricket ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း New Star Cricket အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Five Aces Publishing Ltd.
New Star Cricket APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ